Dryfree ndiye China kuti fekitari wokutanga kushandisa kugadzirwa dehydrator, zuva dryers, kupisa pombi Dryer michina uye rezuva + kupisa pombi Dryer, iyo yaishandiswa aome muchero, maruva, zvokurima zvigadzirwa, miriwo, nzungu, nyama, hove, maindasitiri zvinogadzirwa etc.
Kuti uvandudze mhinduro kumhanya mutengi kudiwa uye kuvandudza basa hurongwa, kambani yedu akagadza mapazi enyika dzakawanda uye makanzuru muna China, akabata hwokugadzira uye musika kurovedzwa kuti nani kushumira vatengi.
Tine yakadzikama R & D guru input.The simba uye nzwisisika R & D chikwata zvikuru kunzwisisa nemakasitoma 'kudiwa.
Hatina zvakanaka vakadzidziswa kugadzirwa chikwata, yakatsiga uye hwakavimbika vakaisvonaka wedzerai cheni maitiro uye kunyatsoomerera unhu kudzora hurongwa.
Dryfree vane makore 15 chiitiko nokuomesa bhizimisi uye kushumira zviuru vatengi anenge 150 industries.There vari anopfuura 3000 vanobudirira zviitiko.
We achapa iwe pamusoro-panzvimbo basa pamwe ruzivo chirongwa wevanamakanika.
chikwata chedu utungamiri vane yemhando mabhizimisi uye kutarisirwa pfungwa, mupfumi zvebhizimisi kuvhiyiwa ruzivo uye ouinjiniya chirongwa utariri tsika.
Kugovera zvikuru-basa munhu Kuongororwa basa kuitira zvakanaka kukurukurirana uye Kufambisa nemakasitoma.
Rose Dryer , Chrysanthemum Dryer Machine , Rose Water Recovery Equipment , Rose Kushaya mvura mumuviri muchoto , Rose Dry Machine , Bay Leaf Kuomesa Machine ,